Ady amin’ny tsy fandriampahalemana eto Boeny: mifarimbona ny Ben’ny tanàna sy ny solotenam-panjakana ary ny mpitandro filaminana | Région Boeny
Manoloana ny firongatry ny tsy fandriampahalemana ankehitriny eny anivon’ireo Kaomina tantanan’izy ireo, dia niantso fiaraha-miasa amin’ireo mpitondra fanjakana sy mpitantdro filaminana ireo Ben’ny tanàna 46 ato anatin’ny faritra Boeny.
Mivory indray mandeha isam-bolana ireo Ben’ny tanàna eto Boeny ary ny lehiben’ny faritra no mitarika izany. Ka nandritra ny fivoriana faharoa ny Alatsinainy 24 jolay teo tao amin’ny Bloc administratif Mahajanga, no nandinihina manokana ny resaka tsy fandriampahalemana miseho eny anivon’ny kaomina ary tena mampitaraina ireo Ben’ny tanàna.
Ny halatr’omby, ny fanakanana sy fandrobana taksiborosy amin’ny làlam-pirenena faha 4, ny fandripahana ala sy fandrobana ny harena voajanahary ao amin’ny faritra arovana Ankarafantsika sy Soalala, ary ny fitsarambahoaka na dia tsy dia misy firy aza. Ireo no tena endrika isehoan’ny tsy fandriampahalemana amin’ny ankapobeny ary mampitaraina ireo Ben’ny tanàna eto Boeny raha namintina ny zava-misy ny lehiben’ny faritra, Atoa Saïd Ahamad Jaffar.
Nasain’ny Faritra manokana araka izany, hiara-dinika vahaolana ny Prefen’i Mahajanga, ireo Lehiben’ny distrika enina, ny Mpampanoa lalàna avy amin’ny Fitsarana ambaratonga voalohany, ny Lehiben’ny zandary, sy ny tafika ary ny polisim-pirenena eto Mahajanga, ny Talem-paritry ny Tontolo iainana, sy ny Talem-paritry fitaterana.
RN4: Mpifindra monina no dahalo
Manoloana izay zava-misy amin’ny tsy fandirampahalemana izay nefa, ho fitandrona sy fiarovana ny ain’ireo Ben’ny tanàna, dia nangataka mihitsy izy ireo mba tsy hoatrehan’ny mpanao gazety ny dinika izay nifanaovany tamin’ireo manam-pahefana.
Araka ny tarainan’ireo Ben’ny tanàna efa heno matetika nefa, dia ireo mpifindra monina avy any atsimo izay mitombo isan’andro, ary mifindrafindra fonenana vonjimaika amin’ireo tanàna amoron’ny RN4 ao amin’ny distrikan’Ambatoboeny, izay faritra mena amin’ny tsy fandriampahalemana ankehitriny, no tena manao ireo asan-dahalo sy fanakanana taksiborsy ary mandripaka ny ala hanaovany saribao, sy mandoro tanety hamboleny tsako sy lojy ary voanjo.
Mbola izy ireo ihany koa no tsy manaja ny valan-javaboahary ao Ankarafantsika, ka manao amboletra mitady hanangana fokontany ao anatin’ny faritra arovana. Ankoatra izay dia mbola avy any atsimo avokoa ireo dahalo mpangalatra omby tratra manao fanafihana sy halatr’omby ao Anjiajia, Manerinerina, Ambondromamy, Belalitra, Madirovalo, Tsaramandroso, izay samy ao amin’ny distrikan’Ambatoboeny.
Halatr’omby ao Soalala: dahalo avy Melaky
Ankoatra ireo nefa dia nanamafy tamin’ny kabary fanokafana ny lehiben’ny faritra Boeny fa araka ny tatitra azony avy any amin’ny kaomina Andranomavo, distrikan’i Soalala, izay toerana isehoan’ny halatr’omby mavaivay ihany koa ankehitriny, ary nahafatesana olona mihitsy, dia ireo dahalo avy any amin’ny faritra Melaky no mandeha manafika any amin’io kaomina io, izay mifanolotra amin’i Besalampy. Manafika izy ireo ary entiny any ny omby, dia very anjavony rehefa voadio ara-taratasy any.
Tafiditra ao anatin’ny paikady fampandrosoana ny faritra ny ady amin’ny tsy fandriampahalemana hoy ny lehiben’ny faritra Boeny, ka izay no mahasarotiny anay amin’izay rehetra manohitohina izany.
Nisy ny paik’ady sy ny fanapahan-kevitra maromaro niarahan’ireo manam-pahefana sy Ben’ny tanàna nandany fa mbola tsiambaratelo ny famoahana sy ny fampiharana azy.